विश्वमा फैलिँदैछ अर्को भाइरस मंकीपक्स भाइरस, भाइरसकाे जोखिम नेपाल कति छ त ! • Nepal's Trusted Digital Newspaperविश्वमा फैलिँदैछ अर्को भाइरस मंकीपक्स भाइरस, भाइरसकाे जोखिम नेपाल कति छ त ! • Nepal's Trusted Digital Newspaper
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको महामारी नसकिँदै विश्वमा ‘मंकीपक्स’ नामक अर्को भाइरसको बढ्दो संक्रमणले धेरैको ध्यान तानेको छ । पश्चिम तथा मध्य अफ्रिकामा देखिएको ‘मंकीपक्स भाइरस’ बेलायत, युरोप र अमेरिकाका १२ देशमा पुगिसकेको छ ।
‘मानिसबाट मानिसमा भने थुकको छिटा, खुल्ला छाला, मुख, आँखामा भाइरस परे सर्न र संक्रमण गर्न सक्दछ । हाल बेलायतमा देखिएका ‘मंकीपक्स’ संक्रमितमध्ये कतिपय गे, बाई सेक्सुअलहरु पनि छन् । जसले संक्रमण कसरी फैलिरहेको छ भन्ने बहस जन्माएको छ,’ डा. पुनले भन्नुभयाे ।
‘मध्य अफ्रिकाको भेरियन्टले १० प्रतिशत र पश्चिम अफ्रिकामा पाइने भरियन्टले २ देखि ३ प्रतिशत मृत्यु गराउने पाइन्छ’, डा. अधिकारीले भन्नुभयाे, ‘मध्य अफ्रिकाको भेरियन्टले कोरोना भन्दा तीन गुणा बढी मृत्यु गराउँछ ।’
तर, अहिले फैलिएको भेरियन्ट पश्चिम अफ्रिकामा पाइने भेरियन्ट (कम घातक ) चाहिँ हो । ‘यो भाइरस सामान्यता मानिसमा खुल्ला छाला र थुकको छिटाबाट सर्ने देखिएको छ । तर, युरोपतिरका केशहरु हेर्दा कहाँबाट सर्यो भन्ने पहिचान हुन सकेको छैन । भाइरसले सर्ने स्वरुप परिर्वतन गरेको हो कि भन्ने डर भइरहेको छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।
डा. पुन लामो समयसम्म मंकीपक्सका कारण घाउको दाग रहने हुँदा समाजिक विभेद भोग्नुपर्ने हुनसक्ने बताउँनुहुन्छ ।
पछिल्लो समय हवाइ यातायातको सहज पहुँचले गर्दा युरोपका देशमा बढिरहेको उक्त भाइरस आगामी दिनहरुमा नेपालमा पनि नआउला भन्न नसकिने जनस्वास्थ्यविज्ञ बताउँछन् । संक्रमण पुष्टि भएका देशबाट मानिसहरू आउजाउ गरिरहने भएकाले नेपालमा सतर्कका आवश्यकता भएको डा. पुनले बताउनुभयाे ।
अहिलेसम्म नेपालमा उक्त भाइरसको संक्रमणको शंका नगरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा. चुमनलाल दास बताउँनुहुन्छ । ‘अहिलेसम्म मानिसबाट मानिसमा सरेको पाइएको छैन । तर, कपडाहरूबाट सर्छ भनिएको छ । नेपालमा हालसम्म देखिएको छैन । सरुवा रोग भएकाले सतर्कता अपनाउनुपर्नेमा हामी जानकार छौं,’ डा. दासले भन्नुभयाे ।
मंकीपक्सको अहिलेसम्म कुनै उपचार छैन । तर, संक्रमणको रोकथाम र प्रकोप नियन्त्रण गर्न सकिने जनस्वास्थ्यविद्हरु बताउँछन् । मंकीपक्स भाइरसको विरुद्ध बिफरको खोप प्रभावकारी हुने डा. अधिकारी बताउँनुहुन्छ। मंकीपक्स भाइरसको विरुद्ध इम्युनिटी (रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता) नभएका कारण संक्रमण फैलिने डर भएको उहाँको तर्क छ । समाचार संस्था बिबिसीले बिफर र मंकीपक्को भाइरसमा निकै समानता रहेको र बिफर विरुद्धको खोपले ८५ प्रतिशत सुरक्षा दिने उल्लेख गरेको छ ।
‘बालबालिका लागि दिइने बिफरको खोप धेरै समय पहिला नै उन्मूलन भएकाले बन्द गरिएको थियो । जसले मंकीपक्स भाइरस र बिफरबाट नै जोगाउथ्यो’, डा. अधिकारीले भन्नुभयाे, ‘अहिले बिफरको खोप नलाएकाले संसारभरका मानिस मंकीपक्स भाइरसबाट संक्रमित हुने देखिन्छ ।’
शरीरमा बिबिराहरु आउने हुँदा मंकीपक्स वा ठेउला के हो भनेर यकिन गर्न गाह्रो हुने डा. पुन बताउँनुहुन्छ । यदि कोही व्यक्तिमा शरीरमा बिबिराहरु देखिएका छन्, संक्रमण फैलिरहेको देशबाट फर्किएको हो र शरीरमा बिबिराहरु देखिएको छ भने शंकाको घेरामा राख्नुपर्छ । थप प्रयोगशालामा परीक्षणमा पठाउनुपर्छ,’ डा. पुनले भन्नुभयाे ।